“Waa in wixii soo baxa ee Haay’adaha doorashadda qaabilsani ay soo saaraan loo hoggaansamo” | Somaliland.Org
“Waa in wixii soo baxa ee Haay’adaha doorashadda qaabilsani ay soo saaraan loo hoggaansamo”
December 18, 2012	“Wixii jaanis maanta waayay beriba way heli karaan inshaalaahu tacaalaa”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa sheegay in xisbiga KULMIYE iyo dawladdu midna aanu maamulaynin doorashadii Goleyaasha deegaanka ee dalka ka dhacday 28-kii bishii November 2012-kii.
Madaxweynuhu waxa uu ku baaqay in loo hoggaansamo in loo hoggaansamo wixii Haay’adaha sharciga ee doorashada qaabilsani ay soo saaraan.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu sidaasi sheegay galabta markii uu ka soo degay madaarka Hargeysa, oo la weydiiyay waxa uu kaga jawaabayo eedaha qaar ka mid ah ururaddii siyaasaddu u jeediyeen xisbiga KULMIYE iyo xukuumadiisa loo jeediyo inay faro-geliyeen doorashadii, waxaanu yidhi “Arrintaas doorashooyinka xisbiga KULMIYE-na ma maamulayn, dawladuna ma maamulayn. Arrinta doorashooyinka waxa maamulayay Komishanka doorashooyinka qaranka sida uu sharcigu ina faray. Markaa wixii ku su’aal ah ee ku saabsan arrintaasi iyagaa laga weydiinayaa. Dawladdu intii ay doorashooyinka waajib ku lahayd way ka geysatay.”
“Waxaan aad iyo aad uga xun nahay cid kastaaba masuuliyadda ha lahaatee, wixii dhibaato ah ee dadka iyo ummadda soo gaadhay horena waan uga tacsiyadeeyay imikana waan ka tacsiyadeynayaa. Wixii khasaare ina soo gaadhana waa mid ummadeena iyo dadkeena soo gaadhay,”ayuu yidhi Madaxweynuhu.
Md. Axmed Siilaanyo waxa uu baaq u soo jeediyay dadweynaha iyo axsaabta siyaasadda waxaanu yidhi “Waxaan kula talinayaa ummadda iyo dadweynaha iyo cidii xataa wax ka tirsanaysa, doorasho haddii ay timaado cidina way hadhaysaa, cidina way soo baxaysaay’e waxa weeye in dadka guud iyo maslaxadda qaranka laga eego.”
“Waa in wixii soo baxa ee Haay’adaha sharciga ah ee arrimahaas qaabilsani ay soo saaraan loo hoggaansamo,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland. Waxaanu intaasi ku ladhay “Wixii jaanis maanta waayay beriba way heli karaan inshaalaahu tacaalaa.”
Previous PostMadaxweynaha Somaliland oo dalka ku soo guryo-noqday,kana hadlay shirkii ay ka qeyb galeenNext Post“Ganacsiga Dalka oo lagu ogaaday in maalgashigu kor u kacay sannadda 2012″ USAID	Blog